xabsiga ha laga sii daayo wariye C/casiis Axmed Gurbiye – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA xabsiga ha laga sii daayo wariye C/casiis Axmed Gurbiye
xabsiga ha laga sii daayo wariye C/casiis Axmed Gurbiye
Haddii uu Madaxweynu eed shakhsi ah u haysto Wariye Gurbiye dacwad ayuu hay’adda Garsoorka ka furan karaa, laakiin awooda laanta fulinta kuma caburin karo muwaadin Soomaaliyeed. Wiil Vila Somalia jooga oo awood dawladeed looga adkaysiiyo mid ficiis ah oo dibadeeda jooga waa wixii dalkaan ku rogmay.
Haddii uu Madaxweynuhu dhibsaday qaab dhigaalka qoraalka Wariye Gurbiye, waxay ahayd in uu dhibsado aflagaadadasiyaasiyiinta, madaxda iyo maamulada dalka ee xaafiiskiisa laga maalgeliyo. Waxaa madaxweynaha haysta waa wado uu isagu jeexay iyo dhaqan uu horay u jideeyey.
Tan kale, markii uu Karoona Fayris ku dhacay Raysalwasaaraha Ingiriiska Boris Johnson, hoygiisa No: 10 waa loogu keeni karay agab caafimaad iyo dhakhaatiir daawaysa, laakiin sababta uu Cusbitaal dadwaynaha oo idil lagu daaweeyo u tegey, waa in naf hur muujiyo, shacabkiisana ka naf jeclaysan, wixii ay qabaana la qabo. Waa tii uu Raage Oomaar ayaa bartiisa Twitter ka ku qoray “Ina adeerkeey iyo Boris Johnson isku Isbitaal ayey caawa jiifaan”
Qore Cabdiraxmaan cabdi shakuur
Previous articleSidee Jidhka Bani Aadamku Isaga Difaaccaa Covid-19 (xogo aanad hore uga aqoon)
Next articleCiidamada Ethiopia ayaa saaka Adkeeyay dhaqdhaqaaqa Xadka wajaale
Komishanka Cusub ee Doorashooyinka oo Hoggaan Doortay Xilkiina La Wareegay